နောင့်: ကိုယ့် ရဲ့ ခုတလော လေးက
Posted by မေဇင် at 12:00 AM
Game ဆော့ တာ အခုတလောလေးအတွက် ဆိုတာ သေချာတယ်နော် ကလေးမ... ဟဲဟဲ...
အမှန်ကတော့ အမလဲ တူတူပဲ
Blog ရယ် Pet Sociaty ရယ်...
ဒီနှစ်ခုနဲ့ အချိန်တွေကုန်နေတာ လုပ်စရာရှိတာတွေ အားလုံးကို နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့နဲ့ပေါ့...
ကြွားတာကလဲ လွန်ရော။ ဘာဟင်းချက်ပို့လို့ ချစ်တာလဲ။ ဂလိုဆို နာ့လဲနင့်ကိုဟင်းချက်ပေးတာဘဲကို။ နာ့ကျမချစ်ဘူး။
သူရှိရင် လိုအပ်ချက်တွေ တော်တော်များများ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လို့လား။သေချာတယ်နော်။
ညနေက နင်ပြောတော့ ဘယ်သူမျက်နှာ တရွာထင်တာလဲ။ ဟွန်းးးးးးအပြောင်းအလဲ တယ်မြန်ဘဲ။
နင်တွေးနေသလို အမြန်ဖြစ်ပါစေနော်။ လိုက်ပြန်ဟယ် ကြာဒယ်။ နင့်အကို ကျမ်းမာရေးတော့ နာ့လဲစိုးရိမ်တယ်။ဟိဟိ
ိမိသားစုဆီ ကို တိတ်တိတ်လေးပြန်လာပီး
၀ါးးးးးးးး ဆိုပြီးအမြန်ဆုံး ခြောက်လှန့် နိုင်ပါစေ လို့ 
တစ်ယေက်ချင်းဆီက မတူညီတဲ့ idea လေးတွေအမြင်လေးတွေရတယ်..
အကြင်နာလက်တွေနဲ့ဆိုတော့ ဘာဟင်းပဲချက်ချက်ပေါ့ကွယ် စားလို့ကောင်းပြီးသားပဲနေမှာပေါ့ ရှလွှတ် :P
face book acountမရှိဘူးကွယ် ဖွင့်လည်းမဖွင့်တတ်ဘူး
ဟိုဘဲနာကြီးတွေကိုတော့ ကြိတ်ပြီးလည်းဆဲတယ် ပေါ်တင်လည်းဆဲတယ် သင်္ချိုင်းကုန်းမှာသရဲမရှိဘူးကွဲ့
နောင့်ရဲ့ခုတလောကိုဖတ်ရင်း ကို့်ရဲ့ခုတလောလေး ဒီညစရေးရတော့မယ်
ဘလော့ ၀င်မရဘူး။ အကောင်ကိုက်ပီး ဂူဂယ်လ်က ပေးမ၀င်ဘူးး ပြောနေတာနဲ့ အိမ်က သယ်ရင်း စက် ဓားပြတိုက်ပီး ၀င်လာတာ။
ကြည်နူး၊ လွမ်းမောစရာလေးတွေနဲ့ ခံပြင်းဒေါသလေးတွေ နောင့်စာလေးနဲ့ အတူ ခံစားသွားပါတယ်။
ညီမလေးရေ.. ဆန္ဒ နဲ့ ဘ၀ တစ်ထပ်ထည်း.. အမြန်ဆုံးနဲ့ အမြဲတမ်းးး ကျနိုင်ပါစေ လို့။
သိချင်တာလေးးး ရေးပေးတာ တကယ် ကျေးဇူးပါ
အတူတူ အိမ်ပြန်ကြရအောင် လေ။
လွမ်းနေတယ် ခုတလော ပိုလွမ်းနေတယ် ။
လယ်တောထဲ မှာ ကျွတ်တို့ ၊ မျှော့တို့ရှိလား ဟိဟိ..
သွေးလာလှူ မလို့လေ ...
ချက်ကျွေးတဲ့ ဟင်းတွေ မကုန်ရင် ဒီဖက် လှမ်းပစ်လိုက်နော်.. ပီ ကို ချက်ကျွေးမဲ့သူ မရှိဘုးကွယ်.. ဗြဲ .. ဗြဲ...
အယ် သူ ကတော်လိုက်တာ အဟီးးးပြောလိုက်နော် တော်တယ်လို့ အဟက် နောင့် ကံကောင်းတာပဲ ဟိဟိ အားလုံးလဲ ဖတ်သွားတယ်နော်
တိတ်တိတ်လေးပြန်ပြီး မိသာစုကို ၀ါးးးးးးးး ဆိုပြီး ခြောက်ချင်တယ်တဲ့ ... စိတ်ကူးလေးက ရိုးသားပြီး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ...
ဂိန်းဆော့တာတော့ ယုံပါတယ်။ အိမ်ပိုင် ယာပိုင် နဲ့တောင် ဖြစ်နေပြီပဲး)
နောင်ရေ...... level ကိုတက်အောင်လုပ်ပစ်နော်...
နောင် သိတယ်မလား... :D
ဘယ်လိုလိုက်လိုက် မီမှာမှ မဟုတ်တာကွယ်။ မလိုက်ပါနဲ့။ ဟဲဟဲ။
နောင့်နောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ အဋ္ဌာရသ 18 ရပ်ကို တဖက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်သွားလို့ ဂုဏ်ယူနေပါတယ်။
အင်းနောင့်ရဲ့ခုတလောလေးတော့ဖတ်ပြီးပြီးး ထောထောက နောက်ကျရင်ရတယ်မလား အဟီးး
ကံကောင်းတဲ့ ညီမလေးရဲ့ လတ်တလောလေးကို အားကျစွာ ဖတ်သွားတယ်နော် :)
ချစ်သူကတောင် ဟင်းတွေချက်ပို့တယ်ဆိုလို့ပါ ။
ရေးပြီးပြီနော် နောင့် :) အမတာဝန်ကျေပါတယ်နော် :)
အိမ်ကိုတိတ်တိတ်လေးပြန်ပြီး ၀ါးးးးကနဲလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်
ကူလေးက ကလေးဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတယ်.း))
နောင့် ။ တူတူပဲ လယ်ထဲမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတာနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်။ အပျင်းပါတွ့ဖက်လာတယ်။ :) အိမ်ကို တိတ်တိတ်လေး ပြန်ပြီး ၀ါးးးကနဲအော်ချင်လာပြီ။
ဟင်းချက်ကျွေးတာဆိုရင်တော့ နော်လဲ စားချင်တယ်။ ခိခိ။ =)
အိမ်ပြန်ပြီး ၀ါးကနဲ လုပ်ချင်တာလေး အတော်သဘောကျတယ်၊ ကလေးလေးပဲ။
ဂိမ်းစွဲရင်မှားမယ်နော်၊ ကိုယ်လည်း နှစ်နှစ်နီးပါးဆော့ခဲ့ဖူးးလို့ ကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေ အခုမှ တကယ်နှမျောတယ်။
လတ်တလောမှာ Default Setting တွေ တော်တော်ပါလာပါလား
တို့လည်း ဟင်းချက်ပို့ပေးတဲ့သူတယောက်လောက် လိုချင်လိုက်တာ။ ဟိ။
ကျောင်းပိတ်တုန်းကလေ မေလအိမ်ပြန်သွားတာ နောင်တွေးနေသလိုအိမ်ကိုလုပ်လိုက်တာ။ ပုသိမ်အထိပြန်ချသွားပြီး အိမ်ရှေ့ရောက်မှအိမ်ကလူတွေ အံ့သြပြီးပြေးဆင်းလာကြတာသိလား။ ပျော်ဖို့အရမ်းကောင်းတယ်။
ဘာဂိမ်းတွေ ဆော့နေတာလဲဗျ။ ကျွန်တော်လဲ ဂိမ်းသရဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် အဟီး။ အခုတော့ ဂိမ်းသရဲဘ၀က ကျွတ်သွားပြီ။
နောက်တခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တဂ်စရာရှိလာရင် မေဇင့်ကို လှမ်းခေါ်လိုက်မယ်...
desire place is changed??
the world is changing so fast :)
your very first desire is the same with me. :)
i have asked my mom if it is good to do that. she answered "ahh.. ma lote par nal. thar thar yal tal." :)
အီဖေကိုမှ ၁ စစ်စစ်ေ၇မရောဘူး။
ဖြစ်ချင်တာတွေ လုပ်ခြင်တာတွေ အကုန် ဖြစ်မြောက်ပါစေဗျာ
တွေးမိနေတာလေးကို တော်တော် သဘောကျတယ်။